मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन हुँदै, कस्को कोटाबाट को हुँदैछन् इन ? - EKalopati
मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन हुँदै, कस्को कोटाबाट को हुँदैछन् इन ?
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शनिबार बस्ने सचिवालय बैठकले धेरै विषयको टुंगो लगाउने भएको छ । पार्टी विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको सुझावलाई अन्तिम रुप दिई निर्णय प्रक्रियामा लगिने भएको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हातमा रहेको सुझावलाई अन्तिम रुप दिई निष्कर्षमा पुर्याइनेछ ।
कार्यदलले मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन र महाधिवेशन गर्ने विषय समेत उल्लेख गरी सुझाव दिएको छ । तत्कालका लागि नेकपाभित्र मन्त्रीमण्डल पुर्नगठनको विषय प्राथमितामा पर्न थालेको छ । सचिवालयका कुन नेताले कति कोटा पाउने र को को मन्त्री हुने भन्ने विषय समेत भित्र भित्र उठिरहेको छ ।
यसपटक प्रधानमन्त्री ओली पुरै सेट परिवर्तनको तयारीमा छन् । कार्यक्षमता हेरेर राख्नैपर्ने भएमात्र केही मन्त्री रहने भएको बुझिएको छ । बाँकी सबै बिदा हुनेछन् ।
मन्त्रीमण्डलमा प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालका अलावा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम सम्मले कोटाहरु पाउनेछन् । नेकपाभित्र तीन गुटले पाउने मन्त्रीहरुको संख्याले पनि अब को को मन्त्री बन्ने टुंगो लाग्नेछ ।
यसपटक ओलीले नयाँ अनुहारमा आफूलाई असजिलो परिस्थितिमा साथ दिने महेश बस्नेत र कृष्णलाल श्रेष्ठलाई पनि समावेश गर्ने चर्चा छ । तर, दुवै सांसदहरु सांसद अपहरण प्रकरणमा मुछिएका छन् । बामदेव गौतमलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिने चर्चा पनि छ । तर, सांसद हारेकाले यसमा कानुनी अड्चनको विषय छ ।
प्रचण्डको कोटाबाट जर्नादन शर्मा र पम्फा भुषालको सम्भावना बलियो छ । देव गुरुङले पनि यसपटक मौका पाउन सक्छन् । माधव नेपालको कोटाबाट भीम रावल, गोकर्ण बिष्ट र कृष्णलाल महर्जनको सम्भावना बलियो छ । सुरेन्द्र पाण्डे झलनाथ खनाल र माधव नेपाल दुवैले प्रस्ताव गर्नेमा पर्छन् । मन्त्री बन्न अग्रिम दौडधुप चलिसकेको छ । यसपटक मन्त्री बन्नेले महाधिवेशन र आउँदो चुनावमा समेत पकड बलियो बनाउनसक्ने भएकाले दौडधुप तिव्र भएको हो ।
Previous articleप्रहरीको यातनाबाट एक युवाको मृत्यु
Next articleउपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको समिति तत्काल विघटन गर्न चिकित्सकको सुझाव